Però: Sekoly Ambony vaovao ho an’ny mpianatra tena sangany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2010 9:41 GMT
Tany amin'ny fanombohan'ny taona 2009 tany ny filoha Peroviana Alan García no nanambara ny fananganana ny Sekoly Ambony Filohan'i Però [es] aorina any Huampaní, tokony ho 25 km atsinanan'i Lima (renivohitra). Tetikasam-panabeazana (mitady voninahitra) hampidirana ny mpianatra 500 mahay indrindra avy amin'ny sekoly 47 tsara indrindra manerana ny firenena izy ity. Ireo izay tafiditra amin'ity sekoly ity moa dia handrato fianarana mandritra ny roa taona hotarihin'ny sasany amin'ireo mpampianatra mahay indrindra sy fampitaovana isankarazany.
Amin'ny alalan'ny fifaninanana no hidirana ao, ary efa havoaka moa izao ny valim-panadinana amin'izany. Na izany aza dia misy ireo niahiahy tamin'ny fomba fahazoam-baovao ho amin'ny fisoratana anarana. Ohatra amin'izany i Saravia avy amin'ny bolongana Autoeducación Digital [es] izay nanana ahiahy teo amin'izany fisoratana anarana izany:
Aingitraingitry ny filoha, hoy isika tany amin'ny fanombohan'ny fananganana ity Sekoly Ambony ity, ary tokony ho azo nidifiana hay ny fitadiavana izay tokony ho nangarahara taminy hatrany amin'ny famolavolana sy ny fombafomba hidirana aminy. Voalohany aloha, sarotra dia sarotra ny “nisintona” ny taratasim-pampahalalana (fisoratana anarana) ny mombamomba azy tamin'ny aterineto, noho ny fomba nandrafetana azy. Raha any Lima angamba dia mora ny nahazo azy ho an'ireo izay manana aterineto any an-tranony, fa ho an'ny sarambambem-bahoaka mampiasa ny fahazoana miserasera ho an'ny daholobe kosa dia tsy maintsy mandany soles (vola Peroviana) vitsivitsy mba hisintonana ny taratasy mba hanontana azy. Mba azonao eritreretina ve izany ny mety ho fandehany any amin'ny faritany any?
Ankoatra izany i Pedro Martínez avy ao amin'ny bolongana El Arte de Enseñar [es] dia mametraka ny ahiahiny eo amin'ny lafiny maha-ara-dalàna ny fombafomba natao, satria manko sekolim-panjakana ilay Sekoly Ambony:
Araka ny voalazan'ny lalàna dia tsy mahazo mifantina na manavakavaka amin'ny fampidirana mpianatra amin'ny alalan'ny fitsapa-pahaizana ny sekoly, koa raha mifantina ny mpianatra mahay manerana ny sekoly ambaratonga faharoa manerana ny firenena ry zareo amin'ny alalan'ny fitsapana akademika sy saikolojika, dia tokony hisy ny lalàna manokana ho amin'izany.
Fa faly amin'ity fombam-pampianarana vaovao ity kosa ny Peroviana sasany, ary miresaka izany ao amin'ny Peru 21 [es] i Arturo:
Hevitra tena tsara. Ao anatin'ny tontolo izay mihamanjaka ny fifaninanana, dia ilaintsika ny mampirisika ireo mpianatra mamirapiratra hanana faniriana handresy (zavatra toa adino eto amin'ny firenentsika) sy hahasahy hiatrika fifaninana. Voaantoka ny zon'ny rehetra hahazo fampianarana maimaipoana, fa tsara raha raha mba mitovy ny sehatra ho an'ny mpianatra sangany hahafahany mampivelatra ny tenany sy mampandroso an'i Però. Manantena fa tsy hiorina amin'ny “fampahalalana” ny fampianarana fa amin'ny alalan'ny “fampivelarana” ny saina, ny toe-batana ary ny fanahy.
Koa satria moa hanomboka amin'ny 1 marsa ho avy izao ny fotoam-pianarana vaovao dia nanambara,ny anaran'ny mpianatra nahazo ny naoty ambony indrindra ny tmedia [es] . Ny anaran-drazazavavy dia Yazmín Lazo Cahui [es], 14 taona izy ary mipetraka any Arequipa.
Eo amin'ny fombam-pampianarana Peroviana moa ny naoty ambony indrindra mety ho azon'ny mpianatra iray dia 20 fa i Yazmin kosa dia nahazo salanisa 17.5. Fahatelo ny nisy azy teo amin'ny fanadinana an-tsoratra, fa tena tsara dia tsara tokoa ny nosoratany momba ny fitomboan-kafanana amin'ny ankapobeny syny fiantraikany eo amin'ny fiainana andavanandro ka nahazoany ny isa ambony indrindra.
Nahafaly ny ankapoben'ny olona nanerana ny firenena ny nandrenesana fa i Yazmin, ilay nahazo ny isa ambony indrindra, dia zanaka mekanisiana sy mpikarakara tokatrano noho ny elanelana eo amin'ny fampianarana ny lahy sy ny vavy any Però. Mahazo ny 17,5% ny vehivavy any manko ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra, raha 6,1% fotsiny izany ho an'ny lehilahy, araka ny filazan'ny vohikalan'ny hetsika mpiaro ny vehivavy Flora Tristán [es].
Ankoatra izany ireo nahazo ny laharana faharoa sy fahatelo dia mbola zazavavy ihany: Wendy León Espinoza sy Pamela Rojas Huamanlazo ka samy nahazo salanisa 17 avy izy ireo. Izy telo mirahavavy ireo, sy ny mpianatra afa-panadinana hianatra ao amin'ny Sekoly Ambony Filohan'ny Però dia hifindra any amin'ny sekoly vaovao avokoa manomboka ny 26 Febroary izao.